कला Archives - Page3of6- Sarbochcha Media
असल मनले समर्पित भएर सत्कर्म गरौँ, हाम्रो भविष्यको घाम त्यहीँ बाट झुल्किन्छ– राजनराज शिवाकोटी
March 31, 20 10:00 am
१ सबैलाई कोरोनाको तनाव छ भन्छन्, तपाईँलाई कस्तो छ? कोरोनाको सन्दर्भलाई म दुई कोणले हेर्छु, पहिलो हो, प्राकृतिक कोण । यसरी हेर्दा जे भइरहेको छ ठिकै भइरहेको छ । म त आनन्द मानेर बसिरहेको......
March 31, 20 3:21 am
१ सबैलाई कोरोनाको तनाव छ भन्छन्, तपाईँलाई कस्तो छ? कोरोनाको सन्दर्भलाई म दुई कोणले हेर्छु । पहिलो हो प्राकृतिक कोण । यसरी हेर्दा जे भइरहेको छ ठिकै भइरहेको छ । म त आनन्द......
भारतीय गायिका कनिका कपूरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण
March 21, 20 6:51 am
एजेन्सी, ८ चैत । भारतीय गायिका कनिका कपूर कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । शुक्रबार टेस्ट गराउँदा कपूरमा कोराना पोजेटिभ देखिएको जनाइएको छ । उनी लन्डनबाट फर्केकी थिइन् । उनी यति बेला लखनउको किंग......
नेपालकै पहिलो कमेडी रियालिटी सो ‘कमेडी च्याम्पियन’ नै विवादित
March 14, 20 5:13 pm
काठमान्डौ, चैत्र १। नेपालकै पहिलो स्ट्यान्ड–अप कमेडी रियालिटी सो ‘कमेडी च्याम्पियन’ नै विवादित बनेको छ । खबपुका समर्थकले भोटिङमा चलखेल भएको भन्दै नाराबाजी गरेपछि विवादित बनेको हो । १२ बजेसम्म तोकिएको भोटिङ समय कसैलाई......
कविता : आमाको मुटुको टुक्रा टुक्रिदै अक्षरहरुमा
March 14, 20 3:40 am
पुनम घिमिरे खाम भित्र रातो मसिमा कसैको जिन्दगी आयो जिन्दगीसँगै अक्षरहरुमा सिन्दुर फिर्ता आयो ती अक्षरहरु बोल्दै थिए उस्को अन्तिम बोलि बोलि बोकि मायाको अक्षर कोसेलि खाम भित्र आयो । आँखामा अनेक सपना बोकि......
प्रकाश कोइरालको उपन्यास ‘प्रपञ्च’ लोकार्पण
March 8, 20 11:30 am
काठमाडाैं, २५ फागुन । प्रकाश कोइरालाको उपन्यास ‘प्रपञ्च’ बजारमा आएको छ । शनिबार राजधानीमा आयोजित एक समारोहबीच ‘प्रपञ्च’ लोकार्पण गरिएको हो । लेखक तथा पत्रकार अश्विनी कोइराला र पद्मकन्या क्याम्पसकी उप-प्राध्यापक तथा लेखिका अम्बिका अर्यालले......
February 29, 20 3:57 pm
फलाउँछु गहुँ, कोदो, मकै र धान जौ, फापर, तोरी म त हो किसान छैन मलाइ रहर ठुलो महल बनाउने पुगे हुन्छ बिहान बेलुका खान लाउन । बिहानै उठ्छु एक हल गोरु साथमा हलो......
February 29, 20 1:52 pm
राजनीतिमा नारीको सहभागिताबिना समृद्घ मुलुकको परिकल्पना नै गर्न सकिन्न तर तर विडम्बना समाजको नारीप्रतिको नजरको कारण भनौँ कि ऊ आफ्नै कारणले भनौँ, नारीको राजनीतिमा उल्लेख्य उपस्थिति हुन सकेको छैन। नारी शिक्षा आजको आवश्यकता......
कविता : हराएको माटो
February 22, 20 3:24 am
पुनम घिमिरे हर बोटमा यसरी फूले जिन्दगी खुसी फूलेसँगै हर बालासँगै झुल्यो पसिना हर गेडामा बास आयो जिन्दगी माया मिसिएसँगै । बटुल्दै गर्दा ती बालाहरु हाँसेको थियो सायद बसन्तलाई मदहोश पारी धेरै पहिला अझै......
February 20, 20 2:08 pm
ललितपुर, ८ फागुन । अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको अवसरमा शताव्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई यस वर्षको राष्ट्रिय मातृभाषा पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको उक्त पुरस्कार......